I-Fondant Recipe (eyenziwe ekhaya) + Isifundo seVidiyo - Iindlela Zenkcubeko
Iresiphi emnandi (LMF)
Iresiphi ethandekayo enencasa, ilula kakhulu ukusebenza nayo, ayikaze ilile okanye ifumane ulusu lwendlovu
Le recipe ye-fondant iyintandokazi phakathi kwababhaki bokuzonwabisa kunye nababhaki abaqeqeshiweyo ngokufanayo. Ithambile, igudile, kulula ukuyenza. sebenza kunye kwaye umnandi kakhulu! Le recipe ye-fondant ilungile kakhulu ngekhe uphinde uthenge i-fondant ebizayo kwakhona.
Iresiphi yam ethandekayo (i-LMF fondant) yayiyeyeyokuqala eyapapashwa emva ngo-2010 ndisekhona Inkampani yeCake yeGcisa kwaye iseyindlela yam ekwabelwana ngayo kakhulu.
I-Fondant sisiseko esidlalayo esidlalayo umntwana wakho oneminyaka esibhozo owayehlala efuna. Ukuba i-fondant yesiqhelo yintlama yokudlala edliwayo emva koko i-marshmallow fondant iludongwe olunokutyiwa. Kuyinto eguquguqukayo ngakumbi, kulula ukuyisebenzisa kunye ne-tastier eninzi (andikucebisi ukuba udle udongwe nangona kunjalo).
Iresiphi yam ethandekayo sele yenziwe kwakhona, yaphinda yapapashwa kwaye yahlanjwa ngamawaka wababhaki, iicaker kunye neebhlog. Yaduma kangangokuba yade yabizwa ngokuba yi-LMF (liz marek fondant) ngabalandeli bayo abakhulu. Ndixelelwe iminyaka ukuba ukwenza uthando 'kukuchitha ixesha kakhulu' okanye 'kunzima kakhulu kumxube'. Kwezi ntsuku kuyaziwa ngokubanzi ukuba ukwenza eyakho ifondant yeyona ndlela yezoqoqosho, emnandi kwaye kulula yokufumana umgangatho ophezulu.
IMarshmallow Fondant vs Fondant yesiqhelo
Ukuqala kwam ukuhombisa ikeyiki njengezinto zokuzonwabisa ngo-2008, ekuphela kothando endandilwazi ngoWilton. Bendingazi nokuba ezinye iimveliso zothando zikhona. Bendingazi ukuba kunzima ukuyisebenzisa kuba yonke le nto bendiyiqhelile. Ndicinga nje ukuba kuthathe i-2-3 ukuzama ukugubungela ikeyiki. Oku kwakungaphambi kwamajelo eendaba ezentlalo kunye namaqela e-facebook ukuze uninzi lwam lwe-caking luvele kumzabalazo oqinisekileyo.
Ixesha lokuqala lokuzama ukwenza uthando lwalungekho kwimfuneko emsulwa. Ndithathe i-odolo yomzuzu wokugqibela kwaye ngequbuliso ndazifumana ndingenalo uthando olwaneleyo lokundinika iprojekthi yam! Cue imo yovalo! Ndijonge iresiphi yendlela yokwenza fondant kwaye ifuna itoni yokupheka kunye nezinto endingenazo. Ok ubetha omnye. Ndijonge enye iresiphi 'elula yokwenza ekhaya' efuna kuphela izithako ezibini. I-Marshmallows kunye noshukela olungumgubo. UKUNGAPHUMELELI KAKHULU. Yaqhekeka, yakrazuka kwaye yayinamafutha ngokwenene? Andiqinisekanga ukuba kunokwenzeka njani. Ngokuphelelwa lithemba, ndadibanisa i-fondant engaphumelelanga malunga ne-1/2 iponti ye-wilton fondant eseleyo. Ndayixuba, ndayisonga ndaza ndothuswa yindlela ekulula ngayo ukuyigquma ikhekhe! Akukho kukrazuka, akukho manqaku epokotho, akukho mabhabhu! Kwaye yindlela iresiphi yam edumileyo eyazalwa ngayo.
Iziphumo ezingcono nangakumbi, zama ukubeka le fondant ngaphezulu kweyethu iresiphi yekhekhe emhlophe kwaye ubone indlela ezimnandi ngayo ezi zimbini zisebenza kunye.
Kutheni usongeza kuLuthando kuLuthando?
Ndifumana lo mbuzo kakhulu. Ndiyayifumana. Kubonakala ngathi kubuya umva kancinci ukongeza i-fondant kwiresiphi enomdla kodwa undive.
Kuyenzeka ukuba kwenziwe i-marshmallow fondant ngaphandle kokongeza i-fondant eyenziwe kwangaphambili KODWA ayizukunwaba. Ngeke nje. Ndiyazi abantu abaninzi abenza i-marshmallow fondant ngaphandle kokwenza kwangaphambili kodwa ayenzi nje kakuhle kwaye ulapha ukuze ufunde malunga ne-BEST fondant eyenziwe ngaphandle apho kunjalo?
Isizathu sokongeza kwifayile ye- ukuthanda kwangaphambili kukuphucula ukusebenza kwe-fondant eyenziwe ekhaya kwaye ngokusisiseko wenza i-batch ye-fondant enexabiso eliphantsi elinokuthi lingasebenzi okanye lingcamle kakuhle kakhulu kwibhetshi enkulu ekumgangatho ophezulu, super yummy fondant.
Yintoni Eyenziwe Ngothando?
Ivenkile ethengiweyo fondant inokwenziwa ngezinto ezininzi kodwa ngokubanzi, yenziwe ngeswekile, incasa kunye nolunye uhlobo lwentshung (ukuyenza yolule). Kuxhomekeka kudibaniso oluchanekileyo, ubume bakho obuthandekayo bunokuthamba ukusuka ekuthambekeni nasekuncangatheleni ukuhlafuna okanye nokuba nzima! Ndihlala ndixelela nabani na othi abayithandi incasa ye-fondant ethanda iitshokholethi yexabiso eliphantsi yokutya xa kuthelekiswa necouverture, imicimbi esemgangathweni. Ayizizo zonke iifondant ezenziwe ngokufanayo!
Nabani na onokukuxelela ukuba ukuthanda okuhle KUKHO.
I-Marshmallow fondant ayinazo izithako ezininzi. IMarshmallows ibonelela ngesona sakhiwo siphambili. IMarshmallows iqulethe iswekile kunye nejelatin. Umncinci wokunciphisa imifuno unceda i-fondant ukuba ingomi. Elona candelo lililo kukuba i-LMF isebenza kakuhle xa usebenzisa i-marshmallows enexabiso eliphantsi elizisa ixabiso kwibhetshi nganye nangaphezulu.
Ngaba ukuthanda ubundlobongela ngokwenene?
I-Fondant yenye yezo zinto abaxumi bam babedla ngokundixelela ukuba BANZONDILE kanye phambi kwe ukungcamla ikhekhe lomtshato . Ndingancuma ndinqwale ndisithi “kulungile” kodwa bendisazi ukuba bakube beyingcamle iresiphi yam emnandi eyenziwe marshmallow (ebizwa ngokuba yi-LMF ngabalandeli) bendiya kuba nayo. Akukho nto yayonelisa njengokubanika into encinci yokusika kunye nokubona inkangeleko yobuso babo isuka 'Andizukuyithanda le nto' kothuke olusulungekileyo, emva koko uhlafune kancinci, uncumo olukhulu, ekugqibeleni 'OMG oku kuhle ngokwenene! ”
Izithandani ezithinta ipeni okokuqala
Uthando lwam lwe-marshmallow ibe sisixhobo sam semfihlo iminyaka kwaye ngoku inokuba sesakho.
Iresiphi elula yokuFunda kwabaQalayo
Ke uyafuna ukusebenza nefondant kodwa uyoyika! Ndiyayifumana! Uninzi lwabaqalayo luyoyika ukusebenza nefondant kuba bevile ukuba kunokuba nzima kanjani ukusebenza nayo! Kodwa uyazi ntoni? Imfihlo yempumelelo yokwenyani kukwenza ngokwakho. Ukuba ufumana ukuqhekeka, ukukrazula, ulusu lwendlovu, iiparkmark, amaqamza okanye nokoma, mhlawumbi usebenzisa i-fondant ethengwe evenkileni embi nje.
Ukuba ufuna ngenene ukufunda konke malunga iziseko zokuhombisa iikeyiki ungalujonga uthotho lwethu kwiSugar Geek Show kwaye ukuba ayikuthinti, wethu iziseko zekhekhe lomtshato Ndingathanda!
Le recipe kulula ukuyenza, ayithathi naziphi na izithako ezintle kwaye isebenza kakuhle kanye emva kokuba uyenzile (kushushu).
Ngaba unokwenza uthando ngaphandle kweMarshmallows?
Enye yezinto ezipholileyo kakhulu ezivela kwiresiphi yam ye-LMF mhlawumbi i-DKF (iDanettes Kosher Fondant). Umhlobo wam uDanette akanakutya i-gelatin ngoko ke wayila iresiphi ye-fondant ekulula ukuyenza njenge-LMF kodwa isebenzisa i-marshmallow fluff endaweni ye-marshmallows enexabiso eliphantsi. Isebenza ngokuchanekileyo kwaye is kosher!
Iingcebiso ngokuSebenza noFondant
Nazi ezinye iingcebiso ngokusebenza nefondant eyenziwe ekhaya. Uyakwazi ukufumana okungakumbi malunga neziseko zokuhombisa ikhekhe kuthotho lwethu olusisiseko lokuhombisa ikeyiki.
Qengqa ifondant yakho ibhityile. I-1/8 ″ yindawo elungileyo onokuba kuyo ukuze i-fondant yakho ingakrazuki, ungafumana loo miphetho ibukhali kwaye ufumane uninzi kwibhetshi enye.
Chill amaqebengwana akho ngaphambi kokuba uwagqume. Qiniseka ukuba ifayile yakho ye- ibhotolovane okanye ganache intle kwaye iyabanda (kodwa ayinamkhenkce) ngaphambi kokuba ugubungele ikeyiki yeziphumo ezilungileyo.
Qengqa uthando lwakho lube lukhulu kunokuba ufuna. Impazamo yabaqalayo kukukhupha isithandwa esincinci kakhulu kwaye emva koko ufumane iitoni zeeruffles kunye neenyembezi malunga nesiseko sekhekhe. Ukuba ukhupha isiqwenga esikhulu, siyazigquma.
Imeko yothando lwakho ngaphambi kokuyisebenzisa. Ngaphandle kokuba uyenzile nje, ke hlala ushushu kamnandi kwaye uyixove kakuhle ide ibe intle kwaye yolule. Ingqondo ebandayo iyakuthanda ukukrazula.
Ukuba unamacandelo amaninzi okugubungela, gubungela eyona inkulu kuqala kwaye wenze indlela yakho yehle kweyona incinci ukuze ufumane olona fondant lwakho. Ibhetshi enye ye-LMF iya kugubungela umjikelo we-10 ″ -8 ″ -6 with ngentsalela encinci ukuba uyikhupha ibe 1/8 ″ ubukhulu.
Nje ukuba ukwazi ukwenza iresiphi yakho emnandi eyenziwe ekhaya, unokufuna Faka umbala kwiresiphi yakho emnandi . Isitshixo apha kukuqinisekisa ukuba awusebenzisi umbala wokutya omninzi. Ukuba usebenzisa kakhulu kunokubangela ukonakala kokuthanda kwakho kwaye kuya kujongeka ngathi inemingxunya encinci kuyo.
Ukuba ufuna i umbala okhanyayo we-fondant unokongeza nje umbala omncinci kwimhlophe yakho emhlophe kodwa ukuba ufuna umbala oqaqambileyo okanye imibala emnyama efana Umnyama omnyama okanye umbala obomvu emva koko kuya kufuneka wongeze umbala ngexesha lenkqubo yokwenza iziphumo ezilungileyo.
Izixhobo zasekhitshini zokwenza iMarshmallow Fondant
Umxhubi we Kitchenaid Ukuqala kwam ukuhombisa, bendinekhitshi elilula lasekhaya i-KitchenAid. Yiyo yonke into oyifunayo ngokwenene! Le recipe isebenza kakuhle xa yenziwe ngobukhulu beklasi.
lil wayne apho uthando luya khona
Uyenza njani iMfesane
I-Microwave 1 lb ye-marshmallows kwi-30-second bursts de inyibilike ngokupheleleyo
Yongeza amanzi akho kwaye uthele i-marshmallows encibilikiweyo kwisitya somxube wokuma kunye ne-hook hook
Yongeza kwimifuno yakho yokunciphisa
Qala ukongeza kuyo yonke ipowder iswekile ikomityi enye ngexesha, shiya ikomityi enye ngaphandle
Vumela umxube wakho wokuthanda ube sezantsi kude kube mpuluswa, oku kungathatha imizuzu emi-5 okanye njalo
Gweba i-fondant kwisitya kunye ne-spatula kwisitya sakho seswekile eseleyo
Xolela umxube de kufakwe yonke iswekile eyimpuphu
Fudumeza ivenkile yakho oyithengileyo kwimizuzwana engama-30 kwaye uyongeze kwimarshmallow fondant
Knead de fondant iyolulwa njenge-taffy ngaphandle kokuphula
Ukwenza le recipe, uyakufuna ivenkile encinci ethengiweyo yefondant. Akunyanzelekanga ukuba ibe nguWilton kodwa yile nto ndinayo apha kwaye ixabiso eliphantsi kakhulu KODWA ungayifumana ngexabiso eliphantsi ukuba usebenzisa isigqebhezana. Ndifumana ukuthanda kwam kuJo-Anns okanye Michaels kwaye kuhlala kukho isigqebhezana kwi-intanethi okanye kwi-app. Uya kufuna ukuthenga ibhokisi enkulu (i-5 lbs) kwaye usebenzise isigqebhezana ukufumana isaphulelo se-40%. Ungabhalisela ukufumana amatikiti kanye kwi-app okanye kwiwebhusayithi. Ibhokisi nganye ye-5 lb iya kwenza iibhetshi ezine ze-fondant kwaye kubiza kakhulu ukuthenga ibhokisi enkulu kunokuthenga ibhokisi encinci.
Unako kwakhona ukuthenga i-fondant kwiAmazon kwaye ngamanye amaxesha kuyabiza kunokuba uyithenge buqu kwanangokhuphoni kwaye ufumana ukuhanjiswa simahla ngeAmazon Prime.
Into elandelayo yimarshmallows. Ndithenga eyam eWinco kodwa ukuba awunayo iWinco, jonga nje uphawu lwexabiso eliphantsi lwevenkile. I-Jet-puff ithanda ukuba nzima kakhulu kum kwaye yomile. Uya kudinga ibhegi ye-1 lb. KwiWinco yam ibhegi enye ibiza iindleko .87!
Ezo zezona zithako ziphambili zokwenza i-marshmallow fondant enencasa emangalisayo kwaye engakrazuli okanye yomiswe. Ukuba unombuzo qhubeka uye uwushiye kumagqabantshintshi kwaye ungalibali ukubukela ividiyo ekwiresiphi ukuze ndibone ukuba ndiyenza njani iresiphi yam emnandi.
Ezinye iiresiphi oya kuzithanda
Eyona ndlela ibalaseleyo yokutya ikhekhe
Uyigubungela njani ikeyiki kwifondant
Iresiphi elula ebandayo yebhotolo
Iresiphi emnandi engakrazuli, engakrazuli okanye efumana ulusu lwendlovu! Iresiphi oyithandayo evela kubabhaki bokuzonwabisa kunye nabahombisi bekhekhe ngokufanayo! Ixesha lokulungiselela:5 imiz Ixesha lokupheka:25 imiz Ixesha lilonke:30 imiz Iikhalori:1469kcal
▢32 oz (907 g) ushukela ocoliweyo kuhluzwa (okwabizwa ngokuba siswekile yomkhenkce, iswekile yokuthambisa)
▢16 oz (454 g) kugobolokile I-WinCo, iHy-Top, iAldi, kunye neempawu zomlilo zaseCampfire zisebenza kakuhle
▢Amashumi amabini oz (567 g) UWilton uthanda I-Satin Ice fondant nayo iya kusebenza
▢Mbini tbsp (Mbini tbsp) amanzi ashushu Ngemibala emnyama, sebenzisa i-1 tbsp yamanzi ashushu kunye ne-1 tbsp yokutya umbala wejel
▢4 oz (113 g) ukunciphisa imifuno Ikwabizwa ngokuba ngamanqatha amhlophe emifuno, trex, copha
Uyenza njani into yokuthanda
Phakamisa iswekile eyimpuphu kwaye ubeke ecaleni kwisitya esikhulu.
Beka imifuno imfutshane kwisitya sokuxuba.
Ubushushu beemarshmallows kwimizuzwana engama-40 kwi-microwave ephezulu (okanye ngaphezulu kwesitovu). Gquba ngecephe.
Beka i-marshmallows ibuyele kwi-microwave kunye nokushisa eminye imizuzwana engama-30 (okanye kwisitofu esiphezulu). Gquba ngecephe.
Ukufudumeza i-marshmallows (okokugqibela!) Kwimizuzwana engama-30 kwi-microwave (okanye ngaphezulu kwesitovu). IMarshmallows kufuneka ibe-ooey-gooey okwangoku kwaye ilungele ukongezwa kwisitya sokuxuba. Thela amanzi akho ngaphezulu kwemigxobhozo ukuze ubakhulule emacaleni esitya. Thela kwisitya kunye nokunciphisa imifuno
Jika umxube wokuma kwindawo yokuseta esezantsi (ukuseta 1 kwiKixhenaid stand mixers) ngentla yokuncamathisela Yongeza kwisiqingatha seswekile yakho ecoliweyo, ikomityi yokulinganisa ngexesha, kwaye uvumele umxube imizuzu emi-2. Kuya kuba krakra ukujonga kuqala
Sukuyeka ukuxubana de kube kunamathele emacaleni esitya kwaye kujongeka njengokugudileyo. Yongeza kwenye indebe yeswekile eyimpuphu.
Ukukhupha i-fondant kwi-attachment hook attachment ngokubeka imifuno emfutshane kwiminwe yakho kwaye uyikhuphe kwi-hook.
Thatha umxube othambileyo kwisitya usibeke kwisitya esikhulu kunye neswekile eyimpuphu.
Ukufudumala i-Wilton fondant kwi-microwave imizuzwana engama-40 kwaye ungeze kwisitya esikhulu kunye noshukela olungumgubo kunye nomxube we-marshmallow.
Knead de iswekile eyimpuphu, i-marshmallows kunye neWilton fondant ikakhulu ibandakanyiwe. Awunakho ukusebenzisa yonke iswekile eyimpuphu kuxhomekeke kwimozulu yakho kwaye ilungile ngokupheleleyo.
Tsala i-fondant efana ne-taffy de ibe yolule kwaye igudile. Ukuba kusekho amabala amabi okanye uyakrazula, beka yonke into kwimicrowave kangangemizuzwana engama-30 ukuya kwengama-40 ukuyenza ishushu kwaye ikhuphe njenge-taffy ngokufinyeza ezandleni zakho ide ikhuphe ngaphandle kokophula.
Gcina kwingxowa ye-zip-lock kubushushu begumbi. I-Fondant iya kugcina iinyanga kwi-zip-lock bag. Ukusebenzisa kwakhona, phinda uphinde uxoxe kakuhle uze ulule phambi kokusetyenziswa nganye. Unokongeza umbala njengoko unqwenelekayo kodwa kwimibala emnyama, kuya kufuneka uyongeze ngexesha lokuxuba okanye unokufumana incangathi encangathi.
Uyenza njani ikhekhe enebhokisi enambitha ngokwasekhaya
ubopha njani imikhosi yakho yomoya
ingakanani ipipi kaJon hamm
ukugcina amaqunube kwisikhenkcisi okanye hayi
Iidisney adventures kubukumkani bemilingo